Geo wave eBrazil - Geofumadas
Agasti, 2011 Geospatial - GIS, Microstation-Bentley
Iziganeko zamva nje kwicandelo le-geospatial zisigcinile sonwabisa kunye noluntu lwaseBrazil, ngokungathi okomzuzwana yayiliziko leLatin America. Ayisiyonto incinci, iithiyori ezinje nge Goldman Sachs Group bayichaza njengenye yamandla amakhulu amane avelayo, nolawulo lwehlabathi lonke ngonyaka wama-2050; Kunye neRussia, China ne India, apho igama elithi BRIC livela khona. Ezi ntlobo zoqikelelo zizalwa kwizifundo ezinesiseko esifanelekileyo, kunye nombono wongxowankulu oya kuthi okanye ungahambisi umdla woqoqosho lweenkampani kunye nokukhuthaza amanyathelo otyalo mali.
Akunakuqikelela ukuba kuya kwenzeka ntoni kwiminyaka engama-40, ngendlela abantu ababutshabalalisa ngayo ubutyebi bendalo, kubandakanya neBrazil njengomzekelo ombi. Kodwa kuyathakazelisa indlela iBhanki yeHlabathi ngoku eyijonga ngayo iBrazil njengoqoqosho olukhulu kwiLatin America, eyesibini eMelika kunye neyesixhenxe emhlabeni.
Ngolwimi olwahlukileyo olungabelaniyo neLatin America iphela, iBrazil inethemba lokutsala uqoqosho kumazantsi econe nakwilizwekazi ngokubanzi. Kwezolimo, ihlala ingoyena mvelisi wekhofi mkhulu, kwimfuyo inenkomo yokuqala emhlabeni kwaye i-80% yeoyile etyiwe ngabemi bayo abali-190 lezigidi iveliswa ekuhlaleni. Inqanaba leBancos yenza iBrasil kunye neItalú kwinqanaba leLatin American, isikhundla sePetrobras ngaphezulu kwePemex kunye nePDVSA okanye ubungakanani beRede Globo yimizekelo nje yokukhula koqoqosho eBrazil.
Ukubuyela ebaleni lethu, ngokuqinisekileyo iBrazil sele ineminyaka yayo ikhula kumbandela wezoqoqosho, kodwa ukubonakala kwamanye amazwe yinto ethile yakutshanje. Ngaphandle kweNtlanganiso yesiBini yoMsebenzisi we-Esri eza kubanjwa nge-Agasti, izinto ezintathu ezibalulekileyo zindigcinile ndonwabile kwindawo yaseCarioca:
1. Inkqubo ye I-Forum yaseLatin yaseMelika Geospatial, ephuhliswayo kanye kwezi ntsuku zika-Agasti, inyusa umba, igxila kwimidla yeenkampani ezinkulu eBrazil. Nangona lo msitho unokubonwa njengomsitho ozimeleyo, kungenxa yongenelelo lwangaphandle lokumisa eli candelo ngoPhuhliso lwe-GIS, olwenza ngokuthe ngqo iziganeko ezisi-8 zeli nqanaba e-Asiya, kuMbindi Mpuma nase-Afrika kwaye, ekwangumhleli ukusuka kwiimagazini zeGeospatial World kunye neGeo Intelligence.
2. Iqela leMundoGeo kunye nomda wokubandakanya. Le nkampani ejongene ne-geospatial issue iye yafikelela kwisimo esinomdla ngokubambisana kweemigudu, kubandakanywa ukupapashwa kwamaphephancwadi, iiforam, izivumelwano kunye neenkampani ezimele kunye nokuveliswa kwangoku GeoConnectPeople, eya kuthi ngokuqinisekileyo ibambise abahlali abathetha iSpanish. Iphephancwadi i-InfoGEO, InfoGPS kunye ne-InfoGNSS yimizekelo ye-avant-garde ethathwe ngulo mmandla.
Ukubona okwenzekayo ngeGeConnectPeople kwiintsuku ezimbalwa (ngaphezu kwamalungu e-700) kusenza sicinge ukuba kuya kufuneka sifunde isiPutukezi phambi kweMandarin.
3. Ku-Insipred yango-2011. Umdla ogqithisileyo esiwubonayo kwiiNkqubo zeBentley eBrazil kungenxa yale nzame yokwenza ukuba icandelo libonakale. Nangona kunjalo, yinkampani ethatha inxaxheba encinci xa kuthelekiswa ne-AutoDesk, kuyenzeka ukuba njenge-Apple kufanelekile ukulandela umkhondo kuba ngandlela thile babonakalisa indlela yokuziphatha kwintengiso entsha kwicandelo le-geoengineering.
Ngokomdla zam yakutshanje kwi iphefumlelwe, engekamboni bodwa inxaxheba Brazil, kuquka imixholo awinileyo njengoko kubonisiwe kolu luhlu lulandelayo (Ngaphandle Sabesp SA kunye LENC) kodwa soloko zihleli endle eneji.
Inkampani SGO, kwi-2007, iphumelele kwindawo yokuqala kwindawo enezixhobo zamandla kunye ne-Petrobrás.
2009 I-Engevix Engenharia uphumelele kwindawo yokuqala kunye ne-Coqueiros Hydroelectric Turbine.
2010 UMatec Engenharia Uphumelele umklomelo kwi-BIM yokumisela indawo.
Kodwa kulo nyaka 2011, ubuncinane iiprojekthi 14 eBrazil sele baqinisekisa inxaxheba kwazo baphenjelelwe ukuba kubanjwa eYurophu 8 ukuya 9 Novemba, njengoko kubonisiwe kule theyibhile ilandelayo, kwaye ngoku kwiindawo lwezibonelelo, imigodi kunye neenkqubo ze-hydrosanitary.
Ukuyilwa ngokutsha kweMining & Metals
CSA iSitishi seSitishi
Utshini lweMigodi nge-3D Modeling
Izinto ezintsha kwi-Multimedia
UkuSebenza ngaManzi kunye neNdebe yeHlabathi ka-2014 yoFundo
Ukuyilwa ngokutsha kwamanzi kunye namanzi amdaka
Sabesp-Un. Neg Emantla
Ukulungiswa kweVila Santista Booster
I-Plannig Intsha yeZiko lezeMpilo
I-Volkswagen do Brasil
Isakhiwo sokwakha uPaint entsha
I-Santos Dumont Viaduct
Ukwandiswa kweNdlela ye-SP SP 067 / 360
ISanta Catarina 108 Highway
I-3D entsha yeThekhnoloji yokuSebenza koMuntudology
I-Diagnosis yokuSebenza kunye neContigency Plan
Ukuqukumbela, i-Geo wave ifumana amandla ngegalelo laseBrazil, uMthombo ovulekileyo ukwanokubaluleka okukhulu, kwiGeoConnectPeople kukho iqela eliphantse lenzelwe izisombululo ezahlukeneyo ezikhoyo ze-OSGeo. Iintsuku zokuqala zeLatin America ze-gvSIG zabanjwa eBrazil, kwaye owesithathu walo nyaka uzakubakhona kwakhona, isihloko endinethemba lokuthetha ngaso kwinqaku elithile.
Ngexesha elifanelekileyo eBrazil, kwaye kungenzeka ukuba ukuphuhliswa kwayo kuya kusibuyisela inzuzo kwilizwekazi.
Post edlulileyo«Ngaphambilini Abantu, uthungelwano lwentlalo ngemeko yomhlaba
Post Next Iichiza zeenyoni ezivuthayoOkulandelayo »